Golaha Wakiilada; Ansixinta Xeerka Xuquuqda Aadamaha Iyo Gudoomiye Xigeenka Samaale Oo Ka Warbixiyay Waxqabadkoodii | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Mudanayaasha Golaha Wakiilada Somaliland ayaa maanta ansixiyay Xeerka Xuquuqul Aadamaha ee Xeer No:39, kaas oo ay hore u ansixiyeen labada Gole ee Baarlamaanku, balse uu dib u soo celiyay Madaxweynaha Somaliland
Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo Golaha Wakiilada ka dalbaday inay wax ka bedelaan qodobada uu ka koobanyahay qaar ka mid ah .
Fadhigii maanta oo uu Guddoominayay Guddoomiye Ku Xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada C/Casiis Maxamed Samaale, waxay mudanayaashu ka hor intii aanay codka u qaadin xeerka oo dhan loo xaadiriyay qodobada wax ka bedelka lagu sameeyay, kuwaas oo ay qodob qodob u ansixiyeen, iyadoo markaa ka dib gudoomiye xigeenka golaha Sh. C/casiis Maxamed Samaale oo fadhiga gudoominayay u sheegay mudanayaasha in cod loo qaado xeerka oo dhan, iyadoo ay sidaa ku ogolaadeen wax ka bedelka xeerka Xuquuqul Insaanka 22 Mudane, halka ay diideen 7 Mudane, isla markaana ay ka aamuseen 15 Xildhibaan oo aanu ku jirin Guddoomiyaha oo aan codayn, sidaana uu ku ansaxay xeerka xuquuqda Aadamaha No, 39.
Gudoomiye xigeenka golaha Sh. C/Casiis Maxamed Samaalle, ayaa mudaneyaasha u ku wargeliyay inay maalinta barri ee Axadda yeelanayaan
doonaan fadhi albaabadu u xidhan yihiin, kaas oo sida uu sheegay uu ka qeyb geli doono Wasiirka Wasaarada Maaliyada Eng. Maxamed Xaashi Cilmi.
Dhinaca kale, Gudoomiye ku Xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada Sh. C/Casiis Maxamed Samaale ayaa markii uu dhamaaday fadhigii golaha wuxuu shir jaraa’id oo uu ku qabtay xafiiskiisa xarunta golaha kaga waramay waxqabadkii golaha wakiilada ee muddadii shanta sanadood ee la doortay ay qabteen.
wuxuuna sharaxaad ka bixiyay xeerarkii ay ansixiyeen iyo go’aanadii ay soo saareen, isagoo difaacay waxqabadkii golaha oo uu carabka ku dhuftay inay wax badan qaban lahaayeen, balse ay xukuumaddii hore carqalad ku noqotay xil gudashadii Golaha Wakiilada ee waqtigaa.
Mudane C/casiis waxa uu difaacay muddo kordhinta dhawaan loo kordhiyay xilka golahooda waxaanu sheegay in loo maray waddadii sharciga ahayd. isagoo si balaadhan uga hadlay mushkiladihii uu golaha wakiiladu kala kulmay xukuumadii Madaxweyne Rayaale ee laga adkaaday doorashadii madaxtooyada somaliland ee qabsoontay 26, Jun 2010.